နိုးလော့! | ဇန်နဝါရီ ၂၀၀၈
ဖတ်လို ကိုရီးယား ချက် ဂျာမန် စလိုဗက် စလိုဗေးနီးယား ဆွာဟီလီ တရုတ် ကန်တုံ (ခေတ်သုံး) တရုတ် ကန်တုံ (ရှေးသုံး) တရုတ် မန်ဒရင်း(ခေတ်သုံး) တရုတ် မန်ဒရင်း(ရှေးသုံး) တူရကီ ဒတ်ချ် ဒိန်းမတ် ပိုလန် ပေါ်တူဂီ (ဘရာဇီး) မြန်မာ ယူကရိန်း ရိုမေးနီးယား ရုရှား လစ်သူယေးနီးယား ဟန်ဂေရီ ဟီလီဂေနွန် အင်္ဂလိပ် အီတလီ
▪ “ဗြိတိန်ရှိ သုံးနှစ်အရွယ်ကလေး ထက်ဝက်ကျော်၏အိပ်ခန်းများတွင် ရုပ်မြင်သံကြားရှိပြီး ကလေးတစ်ဦးသည် ပျမ်းမျှ အသက်ခြောက်နှစ်ရှိပြီဆိုလျှင် ၎င်း၏တီဗွီကြည့်ရှုခဲ့ချိန်မှာ တစ်နှစ်အပြည့်နှင့်ညီမျှမည်ဖြစ်သည်။”—THE INDEPENDENT, ဗြိတိန်။
▪ တရုတ်ပြည်တွင် မေးမြန်းခံရသော အသက် ၁၆ နှစ်အထက်လူဦးရေ ၃၁.၄ ရာခိုင်နှုန်းက မိမိတို့တွင် ဘာသာတရားရှိကြောင်း ပြောဆိုကြသည်။ ယင်းက တစ်နိုင်ငံလုံးကို ကိုယ်စားပြုသည်ဆိုလျှင် လူဦးရေ “သန်း ၃၀၀ ခန့်တွင် ဘာသာတရားရှိပြီး . . . အစိုးရထုတ်ပြန်သော ကိန်းဂဏန်းဖြစ်သည့် သန်း ၁၀၀ နှင့် သိသိသာသာ ကွာခြားသည်” ဟုအဆိုပါတွေ့ ရှိချက်က ဖော်ပြ၏။—CHINA DAILY, တရုတ်။
လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်က ဒတ်ခ်ျ နိုင်ငံရေးသမားများနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးသမားများသည် ပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိခိုက်ခြင်းမရှိသောစွမ်းအင်ဖြစ်သည့် အထူးသဖြင့် စားအုန်းဆီဖြစ်သော ဘိုင်အိုလောင်စာဆီများဖြင့် စက်များကို မောင်းနှင်နိုင်မည်ဟု ထင်မြင်ခဲ့ကြသည်။ သူတို့၏မျှော်လင့်ချက်သည် “ပတ်ဝန်းကျင်အတွက် အိပ်မက်ဆိုး” ဖြစ်လာသည်ဟု The New York Times က ဆိုသည်။ “ဥရောပတွင် စားအုန်းဆီလိုအပ်မှု မြင့်တက်လာခြင်းသည် အရှေ့တောင်အာရှ၏ မိုးသစ်တောများကို အကြီးအကျယ်ခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းမှုနှင့် ဓာတ်မြေသြဇာအလွန်အကျွံ သုံးစွဲမှုတို့ကိုဖြစ်စေသည်။ အုန်းပင်များစိုက်ပျိုးရန် စိမ့်မြေများကို ရေစစ်ထုတ်ခြင်းနှင့် မီးရှို့ ခြင်းများပြုလုပ်ရာ လေထုထဲသို့ ကာဗွန်ဓာတ်ငွေ့ “ပမာဏများပြားစွာ” ထုတ်လွှတ်ရသည်။ ရလဒ်အနေနှင့် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသည် “ကာဗွန်ဓာတ်ငွေ့ ထုတ်လွှတ်ရာတွင် ကမ္ဘာပေါ်၌ တတိယလိုက်သောနိုင်ငံဖြစ်လာပြီး ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှုအတွက် တာဝန်မကင်းဟု သိပ္ပံပညာရှင်များက ယုံကြည်ကြသည်” ဟု Times ကဆို၏။
Bulletin of Atomic Scientists (BAS) စာစောင်၏ယူဆချက်အရ လူသားတို့သည် နျူကလီးယားဘေးဒဏ်နှင့် မည်မျှနီးကပ်နေကြောင်းကို ဖော်ပြရန်၊ “လူ့ယဉ်ကျေးမှု၏ပုံဆောင်အဆုံး” ဖြစ်သည့် သန်းခေါင်မတိုင်မီ ငါးမိနစ်အလိုကို ညွှန်ပြဖို့ ဒဏ်စီရင်ရာနေ့နာရီကို နှစ်မိနစ် ရွှေ့ပေးလိုက်ပြီဖြစ်သည်။ အဆိုပါနာရီကို ယင်း၏သမိုင်းဝင် အနှစ် ၆၀ အတွင်း ၁၈ ကြိမ်သာ အချိန်ပြန်တိုက်ခဲ့ရသည်။ နောက်ဆုံးအကြိမ် ပြန်တိုက်ခဲ့ချိန်မှာ နယူးယောက်မြို့ရှိ ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေးဗဟိုဌာန တိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက် ၂၀၀၂၊ ဖေဖော်ဝါရီလတွင်ဖြစ်သည်။ နျူကလီးယားလက်နက်များ ဆက်လက်တီထွင်၍ တည်ရှိနေသည့်အပြင် နျူကလီးယားကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများကို လုံခြုံစွာ မထားရှိနိုင်ခြင်းက “ကမ္ဘာပေါ်တွင် ပျက်စီးမှုအများဆုံး နည်းပညာကြောင့်ဖြစ်သော ပြဿနာများကို မဖြေရှင်းနိုင်သည့်လက္ခဏာများ” ဖြစ်ကြောင်း (BAS) ၏ထုတ်ပြန်ချက်တစ်ရပ်က ဆိုခဲ့သည်။ ထို့ ပြင် “ရာသီဥတုအပြောင်းအလဲကြောင့်ဖြစ်ရသော ဘေးအန္တရာယ်များသည် နျူကလီးယား လက်နက်များကြောင့်ဖြစ်ရသော ဘေးအန္တရာယ်များနီးပါး ကြောက်စရာကောင်းကြောင်း” အဆိုပါထုတ်ပြန်ချက်က ဆက်ဆိုခဲ့၏။
အိမ်ထောင်ဖက်နှင့်အငြင်းပွားခြင်း သို့မဟုတ် ၎င်း၏အကြမ်းဖက်ခံရခြင်းတို့သည် ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးအတွက် စိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်စေပြီး ယင်းသည် မမွေးသေးသောကလေးငယ်၏ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှုကို ဆိုးဆိုးရွားရွား ထိခိုက်စေနိုင်သည်ဟု မကြာသေးမီက သုတေသနပြုချက်ကဆိုသည်။ လန်ဒန်၊ အင်ပီရီရယ်ကောလိပ်မှ ပရော်ဖက်ဆာ ဗီဗက်ဂလိုဗာက ဤသို့ဆိုသည်– “အမျိုးသမီးတစ်ဦး ကိုယ်ဝန်ရှိနေတဲ့အချိန်မှာ အိမ်ထောင်ဖက်က စိတ်ဆင်းရဲအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင် ကလေးရဲ့အနာဂတ် ဖွံ့ဖြိုးကြီးထွားမှုဟာ သိသိသာသာထိခိုက်ခံရနိုင်ပါတယ်။ ဖခင်ဖြစ်သူဟာ အလွန်အရေးပါတဲ့ကဏ္ဍက ပါဝင်တယ်ဆိုတာ ကျွန်မတို့တွေ့ရှိရတယ်။” မိဘများ၏ ဆက်ဆံရေးအခြေအနေသည် “မိခင်၏ကိုယ်ခန္ဓာရှိ ဟော်မုန်းနှင့် ဓာတုဆိုင်ရာချိန်ညှိမှုကို ထိခိုက်စေ၍ ယင်းကတစ်ဖန် ကလေးငယ်၏ ဦးနှောက်ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှုကို ထိခိုက်စေသည်” ဟု သူကရှင်းပြသည်။
လမ်းတစ်လမ်းတည်းတွင်သာ နေ့စဉ်မောင်းနှင်နေသော ယာဉ်မောင်းများသည် သတိရှိရှိ ဆင်ခြင်သုံးသပ်သည့် သူတို့၏ဦးနှောက်အစိတ်အပိုင်းကို အသုံးပြုလေ့မရှိကြဟု ဂျာမနီနိုင်ငံ၊ ဒရူးစဘာ့ဂ်အက်စင်တက္ကသိုလ်မှ ယာဉ်အသွားအလာထိန်းချုပ်ရေးသိပ္ပံပညာရှင် မိုက်ကယ်ရှရက်ကဲန်ဘာ့ဂ်ကဆိုသည်။ ယာဉ်မောင်းများသည် မိမိအကျွမ်းဝင်နေသောလမ်းပေါ်တွင် ယာဉ်ကြောကို အာရုံစိုက်မည့်အစား အခြားအကြောင်းများကို တွေးတောနေကြသည်။ ရလဒ်အနေနှင့် ယာဉ်မောင်းများသည် အန္တရာယ်များကိုသတိပြုမိရန် အချိန်ပိုကြာသည်။ ထို့ကြောင့် ရှရက်ကဲန်ဘာ့ဂ်က လမ်းတစ်လမ်းတည်းတွင်သာ နေ့စဉ်မောင်းနှင်နေသော ယာဉ်မောင်းများအား ယာဉ်မောင်းနှင်နေစဉ် အာရုံပျံ့လွင့်ခြင်းမရှိဘဲ အမြဲသတိရှိနေရန် တိုက်တွန်းပြောကြားသည်။
အမျိုးသမီးများအား အကြမ်းဖက်မှု—ကမ္ဘာချီ ပြဿနာတစ်ရပ်
အမျိုးသမီးများအပေါ် ဘုရားသခင်နှင့်ခရစ်တော် မည်သို့ရှုမြင်သနည်း
ထူးခြားချက် များစွာရှိသော ပင်လယ်သေ
အိမ်ထောင်ဦးစီးဟူသည် အမှန်တကယ် အဘယ်အရာကို ဆိုလိုသနည်း
စာသား စာပေ ကူးယူရာမှာ ရွေးချယ်စရာများ နိုးလော့! ဇန်နဝါရီ ၂၀၀၈
နိုးလော့! ဇန်နဝါရီ ၂၀၀၈